अख्तियारको अपरेसन : यसरी बढावा दिइँदैछ ‘फेक’ कामलाई, हेर्नुस् प्रमाण – MySansar
अख्तियारको अपरेसन : यसरी बढावा दिइँदैछ ‘फेक’ कामलाई, हेर्नुस् प्रमाण
Posted on December 18, 2015 April 26, 2016 by Salokya
[अपडेट अप्रिल २६, २०१६ : कनकमणि दीक्षित र लोकमान सिंह कार्कीबीचको आपसी विवादको चरम रुप अहिले देखिन थालेको छ। अब आ-आफ्ना गल्तीलाई ढाकछोप गर्न ‘प्रोपोगान्डा वार’ पनि सुरु भएको छ। अनि यस क्रममा माइसंसारका पुराना ब्लग खोतल्न थालिएको छ। यस क्रममा हिजोदेखि अचानक माइसंसारको यो पुरानो ब्लग भाइरल हुन थालेको छ। यो ब्लग सन् २०१५ को डिसेम्बर १८ मा लेखिएको हो। यो पुरानो ब्लगलाई अहिले दीक्षित पक्षकाहरु दीक्षितविरोधी कमेन्ट जति सबै ‘फेक’ हुन् भन्ने खालको प्रोपोगन्डा गर्न उपयोग गरेको देख्दा अचम्मै लाग्यो। खासमा यो ब्लगको सन्दर्भ बेग्लै थियो। दीक्षित प्रकरणबारे थप पढ्न यता क्लिक गर्नुस्]
अख्तियारले गएको वर्ष साउनमा ९ वटा महाशाखा र ५ विकास केन्द्र कार्यालयलाई पत्र लेख्दै आफ्नो फेसबुक पेजमा अनिवार्य लाइक र सकारात्मक कमेन्ट गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर कर्मचारीहरुले टेरपूच्छर लाएनन् जस्तो छ। त्यही भएर भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने संवैधानिक निकाय अहिले फेक फेसबुक पेज खोल्दै त्यसैबाट सकारात्मक कमेन्ट लेखाउनमा व्यस्त भइरहेको भेटियो।
ऐन र नियमले दिएको कार्यक्षेत्र नाघेर गरिरहेका गतिविधिहरुको मिडियाले आलोचना गर्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जो पायो त्यही मान्छेहरुको फोटो इन्टरनेटबाट खोज्दै फेक फेसबुक प्रोफाइल र पेज बनाउँदै आफ्नो फेसबुक पेजमा कमेन्ट गराउन थालेको प्रमाण भेटिएको छ। समाचारको तथ्यगत खण्डन गर्नु अर्कै कुरा तर अहिले संवैधानिक अंगको मर्यादालाई समेत ख्याल नगरेर अख्तियारले पत्रिकाका सम्पादकीयको समेत कडा शब्दमा खण्डन गर्न थालेको छ। यसै क्रममा अख्तियारले हिजो नागरिक दैनिकको सम्पादकीयविरुद्ध एउटा वक्तव्य निकालेको थियो। त्यही वक्तव्य राखिएको फेसबुक पोस्टका केही कमेन्टहरु हेर्दा शंका लागेकोले अलि खोज्दै जाने क्रममा यस्तो पो भेटियो। अख्तियारको प्रशंसामा र अख्तियारले शत्रु ठानेकाको विरोधमा लेखिएका अधिकांश कमेन्टहरु त फेक प्रोफाइलबाट पो रहेछन्। हेर्नुस् प्रमाण
सबैभन्दा पहिले हेर्नुस् यो निर्देशन-
फेक काम बारे यो भिडियो हेर्दा धेरै स्पष्ट हुन्छ-
थप प्रष्ट हुनका लागि यो हेर्नुस्-
अख्तियारले हिजो राखेको वक्तव्यसहितको स्टायटस।
त्यसमा आएका कमेन्टहरु। अब प्रत्येक कमेन्ट गर्नेहरुको बारेमा एकचोटी हेरौँ।
यी हुन् लालबहादुर तामाङ। यिनको प्रोफाइलमा न फोटो छ न अरु केही नै। फेसबुकको प्रोफाइल वा पेज फेक हो कि सक्कली हो हेर्नलाई त्यसका कन्टेन्ट हेरिन्छ। यसमा केही पनि देखिँदैन।
त्यस्तै अख्तियारको सक्रियता राम्रो छ भन्दै प्रशंसा गर्ने सागर पन्डित नामको यो अर्को फेसबुक पेजमा जम्मा ७ लाइक छ। यिनले आफूलाई आर्टिस्ट भनेका छन् तर उनको यो फोटो भने रियल हैन। गुगलमा सर्च गर्दा यस्तो भेटियो-
धेरैले फेक प्रोफाइल बनाउन यो फोटो प्रयोग गरेका रहेछन्। ट्युनिसियाका एक जनाले यही फोटो ट्विटरको डिपी बनाएका छन्।
त्यसैगरी कमेन्ट गर्ने यी अर्का व्यक्ति रविन कार्की पनि फेक भेटिएको छ।
यिनको फोटो गुगलमा सर्च गर्दा यसरी देखियो।
कमेन्ट गर्ने अर्का व्यक्ति विष्णु कुमारले आफूलाई जे भनेर चिनाए पनि त्यो पेजमा भएको लाइक र त्यो पेजका एक्टिभिटी हेर्दा यो पनि फेक पेज भएको र कमेन्ट कै लागि मात्र बनाइएको स्पष्ट हुन्छ।
त्यस्तै कमेन्ट गर्ने यी अर्का व्यक्ति सानु प्रधान पनि फेक देखिएको छ। यिनले पनि आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर राखेका छैनन् र सन् २०१४ देखि कुनै एक्टिभिटी पनि देखिएको छैन।
यो पेजले लाइक भने अख्तियारको पेज, लोकमान सिंह कार्कीको पेजलाई लाइक गरेको देखिएको छ।
कुमार ओली नामका यी अर्का व्यक्तिको नाममा पनि आर्टिस्ट भनेर फेक पेज बनाइएको छ। जसको फोटो फेक छ।
यहाँ हेर्नुस् यही फोटो गुगलमा खोज्दा यसरी देखिन्छ।
जीवन खड्का नामको बिजनेस पर्सन भन्दै बनाइएको अर्को फेक फेसबुक पेज जहाँ फोटो राखिएको छैन।
अनि त्यही जीवन खड्काको पेजले लाइक गरेका पेजहरु हेर्नुस्। अब प्रष्ट हुन्छ यो फेक फेसबुक पेज किन र कसको स्वार्थमा खोलिएको हो।
कमेन्ट गर्ने अर्का व्यक्ति सविन मानन्धरको झन् बिजोग छ। यो स्पोर्टस पर्सन भनिएको फेसबुक पेजमा मात्र एक लाइक छ।
अनि त्यही एक मात्र लाइक भएको पेजले लाइक गरेका पेजहरु हेर्नुस्। अब भन्नुस् कसको स्वार्थमा कसको हितका लागि यो पेज बनाइएको होला?
कमेन्ट गर्ने अर्का महानुभाव महिलाको नाममा सुषमा तिवारी रे। यो फेसबुक प्रोफाइलको प्रोफाइल पिक्चरबारे सर्च गर्दा यस्तो भेटियो।
यी त भारतीय अभिनेत्री पो रहिछिन्।
त्यस्तै देवकोटा सुशीला नामको अर्को प्रोफाइलमा पनि फोटो छैन र त्यसका एक्टिभिटी हेर्दा अख्तियार बाहेक अरु देखिन्न।
कमेन्ट गर्ने अर्को फेक प्रोफाइल।
कोसिस नामको स्पोर्ट्स पर्सन भनी बनाइएको फेसबुक पेजमा मात्र एक लाइक छ। यसमा रहेको फोटो एक विदेशीले खिचेको कपिराइट भएको फोटो हो। तल हेर्नुस् प्रमाण
त्यस्तै कमेन्ट गर्ने अर्का समिदान नामको फेसबुक पेजमा रहेको फोटो कलाकार सिद्धार्थ लामाको हो। तल हेर्नुस् प्रमाण
त्यस्तै विनिता कार्कीको नाममा अख्तियारको समर्थनमा कमेन्टहरु देखिन्छ। यसमा रहेको फोटो पनि फेक हो। गुगलमा खोज्दा यस्तो भेटिन्छ।
त्यो स्टायटसमा मात्र होइन अख्तियारका अन्य पोस्टहरुमा पनि यी फेकवालाहरुले नियमित कमेन्ट गरिरहेको देखिन्छ
6 thoughts on “अख्तियारको अपरेसन : यसरी बढावा दिइँदैछ ‘फेक’ कामलाई, हेर्नुस् प्रमाण”
my favourite nepali blog. so much investigated news.
It’s our fault to expect something good from him, as we all know the real him. Yet again, who was delighted when he was appointed in that post?
अख्तियार र काजी साबको त के कुरा भयो र तर तपाँईंको मिहेनत र अनुसन्धान प्रशंसा योग्य छ । अहिलेको युगमा पनि कसैलाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ भनि नेपालका कथित ठूलाबडाले मात्र सोच्दछन । अब यो पेजलाई अख्तियार र लोकमानको वालमा पेष्ट गरिदिने हो की …..
अब एस्को खन्डन कहिले आउने हो ?
नौलो कुरो भएन। लोकमान सिंह कार्कीको ट्वीटर एकाउन्ट पनि किनिएको फलोअरहरूले भरिभराउ छ। नेपाल र अदुअआसँग दुर-दुर सम्म सम्बन्ध नभएका भारतीय र मध्यपुर्वबाट बनाइएका फेक एकाउण्टहरूले कार्कीलाई फलेको देखिन्छ।यो कुरो इङ्गित गर्नेहरूलाई तु. ब्लक गर्ने उनको बानी नै हो।यो पनि माथिको ठाडै आदेशको परिणाम होला।जनआन्दोलन दबाएको कारण जेलमा सड्नु पर्ने यी जाली व्यक्ति के-कति कारणले कसले गर्दा पुरस्कृत भएका हुन्?
अख्तियारलाई नि त्यो ‘विद्युतीय कारोबार……….ऐन’ लगाएर अदालतमा ठड्याउनुपर्ने । सर्वसाधारणलाई त खुप सताका थिए त त्यै ऐन लगा’र ।